IMicrosoft isungule ingxelo ehlelwe ngokutsha ye-Skype, ngokusebenza kwesixhobo esinqamlezileyo | Ndisuka mac
IMicrosoft iyithatha kakhulu intengiso yeApple. Kwiiveki ezidlulileyo sibonile indlela eyihlaziya ngayo inguqulelo yeMicrosoft Outlook yeMac, ebonelela ngombala omibalabala kunye nokusebenziseka lula, ekwabelana ngomdibaniso nezinye izixhobo, zombini zivela kwa-Apple nakwezinye iindawo. Kumxhasi weposi weMicrosoft, Imiyalezo yesicelo sakho esikhawulezileyo sokujoyina i-Skype namhlanje. Umbono wokuqala lulungelelwaniso lwenguqulo ye-iOS, ehlengahlengiswe kwi-macOS yethu. Ngenyanga kaJuni xa yayizisiwe, ugxininiso olukhulu lwabekwa kwinethiwekhi yenethiwekhi, njengeyona nto intsha ibalulekileyo. Ngokomgaqo, into "Ebonisiweyo" ye-Snapchat okwangoku ayifakwanga kwi-Mac.
Ukuhlaziywa kwesicelo semiyalezo kubandakanya imixholo emitsha enokwenziwa ngokwezifiso, Ukucwangciswa kwemiyalezo yengxoxo, kunye necandelo ekwabelaneni ngalo kwifayile. Icandelo lezaziso elitsha limile, apho ngokujonga ngokulula, sinokwazi kakhulu, imiyalezo elahlekileyo, iimpendulo, ukukhankanywa okanye ukuqeshwa. Ngokucofa nganye nganye, singena kulwazi olupheleleyo.
Kwelinye icala, ukufumana amaxwebhu ekwabelwana ngawo, iifoto, kulula kakhulu kule nguqulo enkosi igalari yeendaba. Kwakhona kulula ukufikelela kwimbali yeekhonkco kunye nazo zonke iintlobo zeefayile.
Enye into ebalulekileyo yile Ukusetyenziswa kweeplagi, kunye nabo sinokwazisa ngoguqulelo ngalunye lwe-GIF, inkqubo yeziganeko, ukuthumela imali kunye nenani elikhulu leefayile, kubandakanya, kunjalo, iifoto kunye nevidiyo.
Elona candelo zentlalo, ibandakanyiwe ngokupheleleyo kuhlobo lweMac. Kwiingxoxo, sinokuphendula nge-emojis kwaye sitshintshe imood okanye sithumele umyalezo kuye nakubani na oqala incoko nathi.
Ngamazwi abaphuhlisi, ngale nguqulo intsha, bazimisele ukufumana imveliso kubomi bethu bemihla ngemihla kwaye konke ngokwembonakalo ye-interface eyaziwa kubo bonke abasebenzisi, ngaphandle kweqonga abalisebenzisayo ngalo lonke ixesha. Ukuba unayo i-Skype kwi-Mac yakho, thatha ithuba lokuyihlaziya. Ukuba akunjalo, unokufikelela kwifayile yayo ukukhutshwa kwiphepha lesicelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » IMicrosoft isungula inguqulelo ehlaziyiweyo ye-Skype, ngokusebenza kwesixhobo esinqamlezileyo
UApple ukhupha i-firmware entsha yeKhayaPod ukuba ithengiswe ngoDisemba